Lahatsoratra Mikasika Ny Jurassic : Hadalàna Nataon’Ilay Ministra Afghana Niretaka Ahiahy Momba ny “Fahamendrehana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2018 6:43 GMT
Hoy ny Minisitry ny Fifandraisandavitra sy ny Teknolojian-tSerasera @ashrafghani hoe “efa Taonjato 1,5 tapitrisa ny tantaran'ny paositra ao amin'ny firenena”.
Ampahany amin'ny olan'i Aryoubi ny fiteny. Amin'ny maha-mpiteny pachtou azy, toy ny kenda izy rehefa Dari, izay tsy hafa fa iray amin'ireo teny ofisialy be mpampiasa aoamin'nyu firenena, eny anivon'ireo foko tsy Pachtou. Iray amin'ireo Ministra 11 tamin'ireo 22 notendren'ny Parlemanta Afghana ny faran'ny taona lasa teo mba hitàna toerana ambony i Aryoubi.
Nandritra ilay kabary tamin'ny 7 Janoary, betsaka ireo teny disodiso nolazainy ary nilaza koa izy fa ny paositra ao Afghanistana dia efa “Taonjato 1,5 tapitrisa” tany aloha no nisiany, talohan'ny nisian'ny olombelona teto an-tany.
Naeem Nazari, filoha mpitantana ny Tambajotran'ireo Fiarahamonina Sivily Afghàna, nanambara toy izao tao amin'ny fahitalavitra tao an-toerana :
Ao Afghanistàna, ny tahan'ny fanabeazana fototra dia eo amin'ny 31% eo ho an'ny olon-dehibe. Ny tahan'ny fampianarana ny vehivavy 17%, raha toa ny lehilahy ka manodidina ny 45%.
Isantaona, mamoaka manam-pahaizana 50.000 hatramin'ny 90.000 ireo Oniversite manerana ny firenena kanefa 15.000 isantaona ihany no raisin'ny governemanta.